I-pastry yaseDatshi kunye ne-confectionery | Ukuhamba kwe-Absolut
daniel | | Holland
La gastronomy yaseNetherlands ayinalo udumo kunye nesiko lamanye amazwe aseYurophu afana neFrance, iSpain okanye i-Itali. Endaweni yoko I-pastry yaseDatshi yaziwa ngokubanzi kwihlabathi liphela. AmaDatshi azichaza njengamazinyo amnandi angenakulungiseka akuthandayo ukupheka kunye nokugcina zonke iintlobo zeedizethi kunye neelekese.
Ngaphambi kokuqhubeka, nasi isilumkiso: iposti yanamhlanje igcwele izidlo nezilingo. Akucetyiswa ukuba uqhubeke ufundela abo batya ukutya:
1 Iilekese zakudala zaseDatshi
1.1 Zoute ukuhla
2 I-krisimesi yaseDatshi
Iilekese zakudala zaseDatshi
Isiselo esinxilisayo esetyenziswa kakhulu eHolland, kodwa naseBelgium, eLuxembourg nakwezinye iindawo zaseJamani. Inkqubo ye- indawo yokwehla ("Ityuwa eyilahliweyo") ithengiswa ngeetyhubhu ezincinci, ezimnyama. Inkangeleko yayo iyafana neye gummies kwaye incasa yayo iyafana kakhulu neye ilayisensi. Zine iindidi ezahlukeneyo ngokuxhomekeke kubungakanani betyuwa eziqulathiweyo.
I-liquorice eyaziwayo yaseDatshi, ukuhla kwe-zoute
IsiDatshi sichaza iipropathi ezithile zamayeza kwi-zoute drop, nangona besitya kuba beyithanda. Kwezinye iivenkile zokubhaka zithengiswa zinencasa yecoconut essence, imint, ubusi, igqabi le-bay kunye nezinye iincasa.
Le yile Uhlobo olucekeceke, olwenziwe ngocingo lwe-classic waffle yaseBelgium (ngesiDatshi, isiraphu kuthetha isiraphu kunye ifele ayicacanga). Le dessert ilungiselelwe epanini ekhethekileyo eyahlulwe ngezikwere. Inhlama inqunywe ngapha nangapha ukuthulula i-caramel ngaphakathi ngelixa ilungiswa.
I-Stroopwafel: inguqulelo yeefffle ezaziwayo ezimilise
Kwiindawo ezininzi ziyalungiswa ngokudibanisa iihazelnuts ezityumkileyo kunye ne-stroop, ngelixa kwezinye intlama inongwe ngesinamoni. Isiphumo sihlala simangalisa.
Ezaziwayo lala Ikhekhe elimnandi elenziwe kwintlama yemvubelo egcwele iziqhamo (iapile, iapilkosi, ipayina, iplamu okanye amaqunube). Kwezinye iiresiphi zokupheka zedatshi, ezinye izithako ezinje nge-custard okanye i-rhubarb zibandakanyiwe.
Kukho izinto ezithile ezahlukileyo ze-vlaai yesiko. Irayisi enye, umzekelo, igcwele irayisi kunye nokhilimu, nangona zikhona ezinye ezityakatye cream okanye itshokholethi.
Ukuhamba phantsi kwaso nasiphi na isitalato kuyo nayiphi na idolophu okanye isixeko saseNetherlands kuyinto eqhelekileyo ukuba impumlo yethu ihendwe livumba elingenakuphikiswa lepoffertjes. Kulo lonke ilizwe kukho izitrato ezincinci zezitrato apho aba bancinci balungiselelwe ngalo mzuzu amaqebengwana ashushu kunye nebhotolo enyibilikile kunye noshukela olungumgubo.
Kwivenkile zokutyela zaseDatshi, ii-poffertjes zithengiswa njengeqebengwana eliswiti kunye nesiselo okanye ikofu. Kukho iivenkile ezikhethekileyo kule mveliso, ibizwa ngokuba iqeqqqqqqq.
Amaqebelengwane amaDatshi ahluka ngokukodwa ngexesha leKrisimesi. Izihlandlo ezizodwa zibiza incasa ekhethekileyo. Inkqubo ye- IKrismesi eNetherlands iqala ukubhiyozelwa nge-6 kaDisemba, usuku lukaSanta Nicholas (Sinterklaas).
Ngomhla wokufika kuka-Saint Nicholas nezipho zabo, abantwana baseDatshi bakwenza mnandi ukulinda ngokusela itshokholethi eshushu kunye nokutya ii-cookies. Abantu abadala benza okufanayo, nangona bephethe iglasi yotywala ngesandla.
I-Pepernoten yoSuku lwe-Saint Nicholas
UPiet, umncedisi ka-Saint Nicholas, ujongene nokuhambisa iilekese phakathi kwabancinci: Ipepernoten (Iicookies ezincinci ezinemilo engaqhelekanga ezenziwe ngerakhi, ubusi kunye ne-anise) kunye mzantsiweb ijinja. Ikwabela ezinye iinxalenye ze igxalabaI-pastry ekhukhulayo egcwele i-almond paste.
Njengakwezinye iindawo ezininzi zehlabathi, uSuku lweKrisimesi eNetherlands lubhiyozelwa njengentsapho ejikeleze itafile enezinto ezininzi. Isidlo siphezulu kunye ikhitshana, Isiqhamo sesonka esomileyo esivame ukuzaliswa nge-almond paste. Le khekhe, iresiphi yeklasikhi kwikhekhe laseDatshi, iyafana naleyo ilungiselelwe eJamani nakwamanye amazwe akuMbindi weYurophu.
I-cherry kwisidlo seKrisimesi eNetherlands: i-kerststol
Kwimizi emininzi yenkolo bakhetha ukufaka i-kerststol kwenye idessert ekhethekileyo: beschuit wadibana muisjes, ikeyiki yesiponji yaseDatshi egutyungelwe kwi-anise eneswekile. Kukutya okumnandi ekubhiyozelwa ukuzalwa kukaYesu kwaye ukongezwa kuyabhiyozelwa nakuphi na ukuzalwa unyaka wonke.
Ngobusuku boNyaka oMtsha, ivumba leoyile evela kwiifreyimu ezinzulu ezivela emakhitshini liqhelekile kumakhaya amaDatshi. Kuzo okumnandi ioliebollen, intlama fritters ekhonzwa yodwa ngeswekile efafazwe okanye igcwaliswe ngamaqhekeza eapile kunye neerasentyisi.
Eyona nto imnandi ukuqala unyaka: yiOliebollen
Kukho iintlobo ezithile zengingqi ze-oliebollen (uguqulo: "ioli yeebuns"). Kwindawo yaseLimburg, umzekelo, zimile okweedonathi kwaye zikulungele ukubhiyozela iCarnival. Kwelinye icala, kumaphondo akumantla ezi fritters zilungiselelwe ngononophelo olukhethekileyo kwaye zijikelezwe ngokukodwa, ziphantse zangqukuva.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhamba kwe-Absolut » I-pastry yaseDatshi kunye neelekese
Iintyatyambo zaseBrazil zisengozini yokuphela